Wholesale TPE Yoga Mat ine Kutakura Strap fitness mat yeFloor Exercises Manufacture and Factory |XGEAR
TPE Yoga Mat ine Carrying Strap fitness mat yeFloor Exercises
XGEAR Exercise Workout mat yakagadzirwa kubva eco-hushamwari TPE iyo isina chepfu, isinganhuhwi, inogona kudzokororwa, yakasimba kusimba uye nani abrasion, zvichienzaniswa nezvimwe zvechinyakare PVC, NBR kana EVA zvinhu.
Iyi isina-slip yoga mat ine tambo yekutakura, haingori yoga mat tambo, zvakare tambo yakatambanudzwa yekudziya, zvakare iine mutsara wekugadzirisa wakanakira iyo yoga, Pilates uye pasi maekisesaizi.
● Eco-Hushamwari TPE Material:Yedu yekusimba mat yakagadzirwa kubva kuTPE (Thermoplastic Elastomer) iyo Isiri Nontoxic, Kunhuhwirira-shoma uye Kudzokororwa, iri nani pane mamwe echinyakare PVC, NBR kana EVA yoga mats.
● Anti-Skid & Better Grip:Iyo yekusimbisa muviri mat inopa yakanakisa kubata uye kubata kwepamusoro nekuda kweiyo yakasarudzika yakashongedzwa yepamusoro layer, inogona kudzivirira muviri wako kubva pakutsvedza kubva pachinzvimbo.Inogona kuchengetedza mat kubva pakutsvedza pasi nedhizaini yeWave Bottom Layer.Saka iwe unogona kuramba wakatarisa kana uchiita Yoga, Kufungisisa, Kutambanudza, Pilates uye Floor Exercises.
● Zvirinani Cushioning:Iwo maficha eiyi premium TPE yoga mat akakwira density uye kusimba, saka maekisesaizi ekudzidzira mat ari nani cushioning.Yakakwana kudzikamisa marwadzo panzvimbo yakaoma semajoini, mabvi, magokora, mawoko, ruoko rwemberi.
● Hupenyu Hwakareruka & Hurefu Hwebasa:Yedu 1/4'' gobvu yoga mat zviyero: 72”X 24” X1/4” inorema makumi matatu aunzi.Tambo inoyevedza inoita kuti itakurwe kutakura.Iko hakuna kunetseka kwekupunzika kana kuputsika nekuda kwechivakwa chayo chakasimba.
Nhamba yechinhu 202373
Feature Mvura-inodzivirira, skid-resistant, high density uye kusimba
Product Care Kugeza Maoko Chete
Dimensions (mukati mebhokisi saizi) L24" x W5" x H5"
Carton size L24.8" x W15.75" x H20.47" (12pcs/bhokisi)
● Yoga mat inoshingirira kunyorova.Inogona kuve nyore kupukuta pasi uye kucheneswa nesipo nemvura.Ndapota ichengetedze ine mhepo yakanaka mushure mekuishandisa.
● Inouya neDual-use Strap: Haisi yekungoita yoga mat tambo, zvakare tambo inotambanudza yekudziya.
Iyo yakanaka yekudzidzira mat yemidziyo kumba yeYoga, Kufungisisa, Kutambanudza, Pilates uye Floor Exercises.
Zvakapfuura: Inotakurika Folding Deck Chair ine Aluminium Frame uye Armrests
Zvinotevera: XGEAR Yakareruka uye Yakasimba Pop Up Shower Tende Yakakosha Kamuri yeKambi, Kukwira neKukura Huru
8-ply Professional Heavy Battle Rope uye Weavin...
Speed ​​​​Agility Training Set neTPE Ladder ye ...
Anti-Burst Fitness Bhora uye Yoga Bhora reExerc...